“Vamwe varume vandinoshanda navo vemazera ababa vangu chaivo vanogara vachinditi ndakanaka uye vanoti dai zvaiita vadzokera kuva pazera rangu. Mumwe wavo akambouya mumashure mangu achibva anhuhwidza bvudzi rangu!”—Tabitha, 20.
Edza izvi: Ratidza pachena asi uchizviita neruremekedzo woudza munhu ari kukushungurudza kuti haudi maitiro aari kuita kana kuti zvaari kutaura. “Kana mumwe munhu akandibata zvandisingafariri,” anodaro musikana ane makore 22 anonzi Taryn, “Ndinomutarisa ndomuudza kuti usandibata futi. Kazhinji munhu wacho anenge asiri kumbozvitarisira kuti ndizvo zvandichamuita.” Kana munhu wacho akaramba achienderera mberi muratidze zvekare kuti hauzvifariri usamboneta kumuudza. Panyaya yokuzvibata Bhaibheri rinonyevera kuti: “Mirai makasimba, muchiratidza kuti makura uye muine chivimbo.”—VaKorose 4:12, The New Testament in Contemporary Language.
“Pandakanga ndiine makore 11 ndiri kuchikoro vamwe vasikana vaviri vakandibatirana mukoridho. Mumwe wacho akanga ari ngochani uye akanga achida kuti ndidanane naye. Kunyange zvazvo ndakaramba, vakaramba vachindinetsa kuchikoro. Rimwe zuva vakandisundidzira kumadziro!”—Victoria, 18.
Nei kuita izvi kungangotadza kushanda: Kana ukasaudza mumwe munhu, munhu uyu ari kukushungurudza anogona kutowedzera kukushungurudza kana kutoshungurudza vamwe.—Muparidzi 8:11.
“Pane mukomana aitamba rugby wandaitya zvisingaiti. Aiva akareba zvokusvika mamita maviri uye airema makirogiramu 135! Akanga atsidza kuti aizorara neni. Gore rose rakapera achingondinetsa mazuva ose. Rimwe zuva zvakangoitika kuti takangosara tiri vaviri mukirasi ndokubva atanga kuswedera pedyo neni. Ndakajamba ndichibva ndabuda nepadhoo ndichitiza.”—Julieta, 18.
“Ini hangu handitombofariri kuitira munhu zvakaipa. Saka kunyange vakomana pavaindishungurudza, ndaivaudza kuti handizvifariri asi ndaizviita ndichisekerera ndisingaratidzi kuti ndiri kurevesa. Vakabva vafunga kuti ndinenge ndinoda zvevakomana.”—Tabitha.
“Zvakangotanga apo vamwe vakomana mukirasi medu vakatanga kutaura majee akashata. Ndakamboita senge ndisinei nazvo kwemavhiki akati kuti asi zvakatozowedzera. Vakomana ava vakatanga kugara padivi neni vachindibata. Ndaivasundidzira kure asi vaingoramba vachidzoka. Pakupedzisira mumwe wavo akandipa bepa raiva rakanyorwa mashoko akaora. Ndakabva ndaripa mudzidzisi wangu. Mukomana wacho ambomiswa chikoro. Ndakazoona kuti dai ndakanga ndagara ndaudza mudzidzisi wangu kare!”—Sabina.
“Mumwe mukomana akasvika akawana hanzvadzi yangu Greg ichigeza. Mukomana wacho akabva aswedera pedyo-pedyo achibva ati kuna Greg, ‘Ndikise.’ Greg akaramba, asi mukomana uyu akaramba aripo. Greg akabva amusundidzira.”—Suzanne.
“Ndiri kuchikoro, vakomana vaidhonza tambo dzebhodhi (bra) yangu uye vachitaura mashoko asingaiti, akadai sokuti ndaizonakidzwa kana ndaizorara navo.”— Coretta.
“Pataiva mubhazi mumwe mukomana akatanga kutaura mashoko akaora achindibata-bata. Ndakanakurira ruoko rwake kure ndichibva ndamuudza kuti andisiye. Akanditarisa zvokuda kundinyadzisa.”— Candice.
“Gore rapera, mumwe mukomana aigara achinditi anondida uye aida kuti tidanane asi ndaimuudza kuti handidi. Dzimwe nguva aipuruzira ruoko rwangu. Ndaimuudza kuti asiyane nazvo asi aisateerera. Rimwe zuva pandaisunga bhutsu akandirova kumagaro.”— Bethany.
Dzidza zvimwe: Ona chitsauko 32 chebhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1, chinoti “Ndingazvidzivirira Sei Pamabhinya?”